Trials Frontier 7.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Trials Frontier
Trials Frontier ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါဆုရ developer RedLynx အသုံးပြုပုံအကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံးနှင့်ပြင်းထန်စွာ-ချီးကျူးစမ်းသပ်မှုစီးရီး၏မိုဘိုင်းဗားရှင်း Play! သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ပေါ်တွင်အခမဲ့အဆုံးစွန်တတ်ကျွမ်းမှုကိုအခြေခံသောစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ GAME တွေ့ကြုံခံစား!
"မှနျသောသဘောတူညီမှုများကဲ့သို့လိုက်ရှာ။ " - Pocket ဂိမ်းကစားသူ
သငျသညျ slick wheelies, အရူးခုန်, နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လေထု Flip နှင့်ဆိုထားပါသည် position နဲ့ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအလွန်အမင်းစွဲလမ်းပုဒ်ပေါ်မှာသင့်ဆိုင်ကယ်စီး!
စစ်တိုက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများနှင့်တိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာကြီးစိုးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးဆောင်! ပြိုင်ပွဲ, စူးစမ်း upgrade နှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ အဘယ်သူမျှမအစားထိုး Accept!
- Physic-based ဂိမ်း
စမ်းသပ်မှုတောင်တန်းမိုဘိုင်းမှရူပဗေဒ-based ဂိမ်း၏ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးစမ်းသပ်မှုအမှတ်တံဆိပ်ဆောင်တတ်၏, အစွန်းရောက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုထိန်းချုပ်ရန်, နောက်သို့ဆုတ်သင့်ရဲ့အလေးချိန်ပြောင်းသွားသို့မဟုတ်ပိုကောင်းဆင်းသက်, wheelies နှင့် position နဲ့ဆက်ဆံဘို့ forward!
- multiplayer / PvP GAME Mode
သငျသညျဦးဆောင်ဖွင့်မြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နှင့်သီးသန့်အသစ်သောဆုလာဘ်အနိုင်ရဖို့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမွငျးစီးဆန့်ကျင် Race ဘယ်မှာ - လစဉ်အဆင့်ရာသီကျွတ်၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း!
- 250+ UNIQUE ပြိုင် Track
လစဉ်လတိုင်းကဆက်ပြောသည်အသစ်အပုဒ်နှင့်အတူ - အပေါ် Race အမှန်တကယ် trailblazing သီချင်းများရာပေါင်းများစွာ!
- 15+ ဆိုးစက်ဘီး
tier ငါ II နှင့် III ကိုစက်ဘီး, ဒဏ္ဍာရီစက်ဘီး, Crazy စက်ဘီးနှင့်အကြီးမားဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုနယ်ခြား၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း! အဆိုပါကားဂိုဒေါင်ထဲမှာစက်ဘီးစုဆောင်းတည်ဆောက် - တမူထူးခြားတဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်အတူအသီးအသီး!
- စုံလင် Ghost Race!
မည်သည့် Track ၏ဦးဆောင်သူအပေါ်ကစားသမားမျိုးနွယ်တစ္ဆေ! မော်ကွန်း position နဲ့ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်နှင့်နယ်ခြားအတွက်အကောင်းဆုံးမြင်းစီးထံမှကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ!
- 250+ ပြုမည့်မစ်ရှင်!
10 အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ enviroments မှာပုံပြင်-မောင်းနှင်ဂိမ်း၏ 50 ကျော်နာရီနှင့်အတူသင်စွန်းမှာနေတဲ့လှည့်ဖျားဘို့သင့်စက်ဘီးထုတ် ယူ. ပြိုင်ကားရချင်မယ်!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/trialsfrontier.game
Instagram ကို: https://www.instagram.com/trials.frontier
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်မှတ်စု: ကျေးဇူးပြု. - စမ်းသပ်မှုတောင်တန်းကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင် In-app ကိုသင့်ရဲ့ device ကို setting တွင်ဝယ်ယူစေနိုင်စွမ်းကို disable နိုင်ပါတယ်။
Trials Frontier အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Trials Frontier အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Trials Frontier အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Trials Frontier အား အခ်က္ျပပါ
ddx10 စတိုး 608 221.28k
Trials Frontier ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Trials Frontier အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://ubimobile.com/termsofuse/index.html
Trials Frontier APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ